‘राष्ट्रिय सभामा मैले संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य निभाउनेछु’
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशबाट सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता युवराज शर्मा निर्वाचित भएका छन्। शर्मा कांग्रेस बाँकेका पूर्व सभापति हुन्। राजनीतिमा दशकौं समय बिताइसकेका उनलाई पार्टीले अहिले मूल्यांकन गरेर लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनायो र निर्वाचित गरायो। राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका शर्मासँग नागरिकका लागि अर्जुन ओलीले गरेको संवादः
नागरिक संवाददाता १३ माघ २०७८ बिहीबार ४ मिनेट पाठ
पहिला संसद्को चुनाव किन?
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखसम्म हुनुपर्छ भनेर हचुवाको भरमा भनेको त पक्कै पनि हैन। विधान, कानुन सबै हेरेर वैशाखभित्रै गर्नुपर्छ भनेको हो पक्कै पनि। वैशाखमा निर्वाचन नभए पर्नसक्ने कानुनी अड्चनबारे पनि आयोगले बुझेरै सिफारिस गरेको होला। निर्वाचन आयोगले उपयुक्त ठानेको समयमा निर्वाचन हुनुपर्‍यो नि !
देवेन्द्र बस्नेत ७ माघ २०७८ शुक्रबार ४ मिनेट पाठ
प्रचण्डलाई ज्ञवालीको प्रश्नः पहिला संसदको चुनाव किन?
स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाखसम्म गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। तर दलीय फरक फरक धारणाका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्यौलता कायमै छ। त्यसमाथि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहभन्दा अगाडि संसदीय चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरेपछि सत्तापक्षीय गठबन्धनमा चुनावी बहस झन् जटिल बन्ने पक्का छ। यसै सन्दर्भमा नागरिकर्मी देवेन्द्र बस्नेतले एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीसँग टेलिफोन मार्फत कुराकानी गरेका छन्।
नागरिक ६ माघ २०७८ बिहीबार ४ मिनेट पाठ
यदि ज्वरो आएको छ भने सतर्क भएर बस्ने र तुरुन्त चिकित्सकको सम्पर्कमा जाने, थप लक्षण देखिन थालेमा पिसिआर गराउन सल्लाह दिएकी छन्। डा.गौतमले अहिले ओमिक्रोनको संक्रमणलाई लिएर आम मानिसमा लापरवाही बढेको बताईन्। ओमिक्रोनको संक्रमण ४/५ दिन रहन्छ भनेर लापरवाही गर्न नहुने बताईन्। उनले अमिक्रोनसँगको सानो लापरवाहिले ज्यान नै जान सक्ने बताईन्।
नागरिक ५ माघ २०७८ बुधबार ८ मिनेट पाठ
सहमतिको आधारमा निर्वाचन गर्न बाटो खुल्योः एनआरएनए महासचिव डा. शर्मा
विगत १८ वर्षअघि समृद्ध नेपालको कल्पनासहित नेपालमा सीप तथा लगानी भित्र्याउने प्रमुख उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अहिले विवादको चक्रव्यूहुँमा फसेको छ। संघको १० औँ महाधिवेशनको लागि विश्वभर छानिएर आएका प्रतिनिधिहरुको विषयलाई लिएर चरम विवाद छ। पछिल्लो विवादमा नेपाल सरकारसहित राजनीतिक दल समेत यस विवादमा मुछिएको छ।
नागरिक संवाददाता ३ माघ २०७८ सोमबार १० मिनेट पाठ
‘पहेँलपुर’ हाम्रो देशको ययार्थ हो
नेपाल निकै सम्पन्न तर निकै अभागी देश हो। हामी प्राकृतिक सांस्कृतिक र सामाजिक रूपमा धेरै सम्पन्न छौ तर यसको समुचित उपयोग गर्न सकिएको छैन। सबैभन्दा दुःखको कुरा हामीकहाँ स्वार्थ र षड्यन्त्रको राजनीतिकबाहेक अरू केही कुराको विकास भएको देखिँदैन। काठमाडौँको सिंहदरबारदेखि सुदूर विकटका स-साना दरबारसम्म स्वार्थ र षड्यन्त्रको राजनीति हावी छ।
सुभद्रा ढकाल २४ पुस २०७८ शनिबार ६ मिनेट पाठ
हामीले जनताले आफैंले घर बनाउने योजना अगाडि बढायौं। जनतालाई सबै कुराको स्वामित्व दिने र उनीहरूकै सहभागितामा निर्माण गर्ने ढाँचा अगींकार गर्दै अघि बढ्यौं। यद्यपि भारत, पाकिस्तानमा पनि त्यही विधि अवलम्बन गरिएको थियो।
हिमाल लम्साल ९ पुस २०७८ शुक्रबार ५ मिनेट पाठ
नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्छु
नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशन भएकै नेतृत्व परिवर्तनका लागि हो। महाधिवशेनमार्फत शेरबहादुरको ठाउँमा अरू कोही नेतृत्वमा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहेका छन्। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने राम्रो माहोल बनेको छ।
नागरिक २७ मंसिर २०७८ सोमबार ५ मिनेट पाठ
व्यवस्थित पार्टी बनाउँछुः प्रकाशमान सिंह,सभापतिको उम्मेदवार
नेपाली कांग्रेसको विधानले हरेक चार वर्षमा महाधिवेशन गर्ने लेखेको छ। ठूलो विपत्ति भएमा कोरोना जस्तो असामान्य परिस्थिति आइपरेमा एक वर्ष थप्न पाइन्छ। तर, कोरोना नहुँदा पनि १ वर्ष थपियो। एक वर्ष असामान्य परिस्थिति खडा गरियो। संविधानलाई पनि उल्लंघन गरियो। संविधानअनुसार हरेक दलले हरेक ५ वर्ष प्रादेशिक र संघीय गरी महाधिवेशन गर्नुपर्नेछ।म्याद गुज्रेको औषधि खाएजस्तो काम भएको छ। नेपाली कांग्रेसको विगतमा महाधिवेशन समयमा हुन्थ्यो। यो भन्दा अघि नीति र कार्यक्रममाथि पनि छलफल हुन्थ्यो।
नागरिक २७ मंसिर २०७८ सोमबार ३ मिनेट पाठ
पार्टीलाई विधानमा चलाउँछुः शेखर कोइराला, सभापतिको उम्मेदवार
नेपाली कांगे्रसका ऊर्जावान, गतिशील कार्यकर्ताले परिवर्तन खोजिरहेका छन् ।
सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने भन्दै महाधिवेशनको हलले अध्यक्ष केपी ओलीलाई जिम्मा दिएको हो?
नागरिक संवाददाता १२ मंसिर २०७८ आइतबार २ मिनेट पाठ
'रोल्पालीहरु शान्त र शालीन भएको पाँए'
रोल्पामा अब फेरी अर्को द्वन्द्वको कुनै खतरा छैन। कुनै पनि नागरिकमा द्वन्द्वको भावना, रिस, इर्श्या प्रतिशोधको भावना केहि पनि छैन। हरेक नागरिकमा एकताको भावना रहेको छ। रोल्पालीहरु शान्त र शालिन भएको पाए।
दिनेश सुवेदी ५ मंसिर २०७८ आइतबार ६ मिनेट पाठ
‘कांग्रेस–माओवादीकै कारण संक्रमणकालीन न्याय टुंगिएन’
द्वन्द्व सुरु हुँदा वा द्वन्द्वको पहिलो वर्षमा पीडित परिवारमा भएको बच्चा अहिले २६ वर्ष पुग्यो होला। एक पुस्ता नै अन्तर हुन थालिसक्यो। त्यसैले ढिलो गर्दा न्यायको अनुभूति हुँदैन। त्यसकारण पनि यो चाँडै टुंग्याउनुपर्छ। त्यसका लागि हिजो द्वन्द्वमा रहेका पक्षहरूको स्पष्ट प्रतिबद्धता इमानदारीसाथ आउनुपर्छ। त्यसैगरी छलफलबाट अघि बढिसकेको र मस्यौदासमेत तयार भएको ऐन संशोधनलाई अविलम्ब अगाडि बढाउनुपर्‍यो।
टपेन्द्र कार्की ५ मंसिर २०७८ आइतबार ७ मिनेट पाठ
राष्ट्र बैंकको नियमन गर्ने पद्धतिलाई उत्कृष्ट मान्नु पर्छ। किनकि यस्तो पद्धतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वस्थतालाई जोड दिने गअेको छ। कुनै बेला बैंकहरूबीच व्यापार वृद्धिका लागि होडबाजी चल्ने गर्छ। त्यस्तो होडबाजीले आर्थिक दुर्घटना निम्त्याउने खतरा हुन्छ। जुन बैंकले बढी अफर गर्न सक्यो, त्यही नै राम्रो हो कि भन्ने जस्तो देखाउन खोजिन्छ। त्यस्तो नहोस् भनेर केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण संयन्त्रको नीति ल्याउनु स्वाभाविक हो।
रुद्र खड्का २३ कार्तिक २०७८ मंगलबार १० मिनेट पाठ
कर्णालीको समृद्धिका लागि ‘६ब’लाई कार्यान्वयन गर्छु: मुख्यमन्त्री शाही
कर्णालीको भूगोल दक्षिणको छिमेकी भारतसँग जोडिएको छैन्। उत्तरको छिमेकी चीनसम्म सडक सञ्जाल पुगेको छैन्। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीलाई चीन विरोधीको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। कर्णालीको समृद्धि र विकासका लागि मुख्यमन्त्रीका अजेण्डा, चुनौति र चीनसँगको सम्वन्धका विषयमा नागरिककर्मी नगेन्द्र उपाध्यायले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग कुराकानी गरेका छन्।
नगेन्द्र उपाध्याय २२ कार्तिक २०७८ सोमबार ९ मिनेट पाठ
पोखराको चालु विमानस्थल नबिगारौं, कुनैपनि बेला काम लाग्न सक्छ
पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिरहेको छ। अबको केही समयमा विमानस्थल संचालन हुँदा अल्ट्रालाइट कम्पनिको भविश्य के हुने भन्नेमा अन्योल छ।
सन्तोष पोखरेल १४ कार्तिक २०७८ आइतबार ५ मिनेट पाठ
‘राजीनामामा म निकास देख्दिनँ’
१० महिनासम्म मुद्दा चढाइदिएन भन्ने आरोपमा प्रस्ट हुन आग्रह गर्छु। यो आरोपमात्रै हो। किन भन्दा पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ, त्यति बेलै मुद्दा दर्ता भएको छ।
गुणराज लुइँटेल र भाषा शर्मा ११ कार्तिक २०७८ बिहीबार १६ मिनेट पाठ
डाक्टरहरु सुगममा मात्रै थुप्रिए, अब दुर्गममा पनि पठाउँछौं: लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री
जति पनि डाक्टरहरु आउनुहुन्छ, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती प्रादेशिक र भेरी प्रादेशिक अस्पतालमै जान खोज्नु हुन्छ। यो भन्दा अन्त जान उहाँहरु मन गर्नुहुन्न।
देवेन्द्र बस्नेत १ कार्तिक २०७८ सोमबार ८ मिनेट पाठ
राष्ट्रियताको दस्ताबेज 'एक'
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले नेपालमा पारिरहेको नकारात्मक प्रभावको बिषयलाई हाम्रो चलचित्र एकले आम नागरिकहरुलाई सचेतना प्रदान गर्न खोजेको छ । एक चलचित्र राष्ट्रियताको दस्ताबेज हो ।
देवेन्द्र बस्नेत १२ आश्विन २०७८ मंगलबार ७ मिनेट पाठ
गाईजात्रा हाँसो, ठट्टा मात्रै हैन : हाँस्यकलाकार कमल गाउँले
यस वर्षको गाईजात्रा पर्व ७ भदौमा छ। गाईजात्रा पर्वका अवसरमा बिभिन्न हाँस्यकलाकारहरुले वर्सेनी ब्यंग्यात्मक प्रस्तुतीहरु पस्कँदै आईरहेका छन्। यो पर्वमा गाईजात्रे प्रस्तुत गर्ने हाँस्यकलाकारको सूचिमा कमल गाउँले पनि पर्छन्।
देवेन्द्र बस्नेत ५ भाद्र २०७८ शनिबार ६ मिनेट पाठ
सडक पूर्वाधार विकासको मुख्य आधार: मेयर पूर्ण केसी
नवौं नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम बनाइसकेको छ। अब यसको कार्यान्वयन गर्न तयारी गरिरहेका छौं। जनताको नियमित सेवाका कामहरू र मनसुनजन्य विपदबाट हुन सक्ने क्षतिबाट बच्न प्रतिकार्य योजना र कोरोना दोस्रो लहर नियन्त्रणका विभिन्न काममा व्यस्त छौं।
दिनेश सुवेदी २२ श्रावण २०७८ शुक्रबार ७ मिनेट पाठ
अन्तर्वार्ताबाट अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्